Naqshadaynta Nadaafadda, Adeegga Nadaafadda, Alaabada Nadaafadda- Hawada
Waxaan Diirada Saareynaa HVAC-yada Cusub & Xalka Nadaafada
AIRWOODS waa shirkad caalami ah oo horseed u ah soo-saarka tamarta kuleylka kuleylka, hawo-saarka iyo qaboojiyaha (HVAC) iyo dhameystirka xalalka HVAC ee suuqyada ganacsiga iyo warshadaha. Balanteenu waa inaan siino macaamiisheenna adeegyo tayo sare leh iyo wax soo saar qiimo jaban.
Farsamo yaqaanno khibrad leh
Dalal u adeegay
Mashruuca Sanadlaha Ah Oo Dhamaystiran
Bixiyaan adeegyo la-talin iyo soo-jeedin, xulashada wax soo saarka ah iyo sawiro naqshadeyn sida ay mashaariicdu tahay.
Bixiyaan xalal filaayo leh naqshadeynta, soo iibsiga, gaadiidka, rakibaadda, tababarka iyo howlaha howlaha.
Xalka By Warshadaha
Balanteenu waa inaan siino macaamiisheenna adeegyo tayo sare leh iyo wax soo saar qiimo jaban.
Laga soo bilaabo xakamaynta marin u helida kahortaga kooxaha, laga bilaabo ilaalada fiidiyowga ilaa amniga internetka.
Beeraha Casriga ah ee Beeraha
Iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyadda qaboojiyaha cilmiga ah, wax-ku-oolnimada sare ee beeraha gudaha ee isteeriyaha ayaa caan ku ah wax soo saarkiisa sare iyo xasilloonida sanadka oo dhan, iyo faa'iido dhaqaale oo faa'iido leh.
Qolka nadiifka ah ama qolka nadiifka ah waa xarun si caadi ah loogu isticmaalo qayb ka mid ah wax soo saarka warshadaha khaaska ah ama cilmi baarista sayniska, oo ay ku jiraan soo saarista walxaha dawooyinka iyo microprocessors.
Daabacaadda habka wax soo saarka ee iskudhafyada dabiiciga ah (VOCs) waxay ka yimaadaan khad ...
Nidaamka HVAC waa mid ka mid ah aasaaska ugu muhiimsan ee lagu rakibo makhaayadda / hudheelka ...
Xeryaha dabiiciga ee isbeddela
Daaweynta hawada ee loo yaqaan 'Airwoods VOC', xakamaynta iyo xalka soo kabashada, wasakhda hawada ee halista ah ee hooseysa ...
Marka ay timaado waxbarashada, inta badan waxaan tixraacnaa iskuul ay labada ardayba ...
Baadh xarunta fiidiyowga ee muujinta mashruuca iyo ilaha waxbarasho.
CVE Taxanaha Joogtada ah ee Magnet Isku-dhafan ...
Muraayadaha Afka Muraayadda Sandwich
Vertical Nooca Heat saar Energy Heat Recovery Ve ...
NIDAAMKA DAWEYNTA VOCs
Diisambar 22, 2020
Laga soo bilaabo 2007 ， Airwoods oo u heellan inay siiso xalal hvac dhammaystiran warshadaha kala duwan. Waxaan sidoo kale bixinaa xalka qolka nadiifka ah ee xirfadleyda ah. Iyadoo lala socdo naqshadeeyayaasha gudaha, injineero waqti-buuxa ah iyo maamuleyaal mashruuc u heellan, tijaabadeenna ...
Diisambar 17, 2020
Aasaaska FFU iyo Naqshadeynta Nidaamka
Waa maxay Qeybta Filter Fan? Qaybta miiraha shaandhada ama FFU waa lagama maarmaan faafiyaha qulqulka qulqulka leh marawaxadda iyo mootada isku dhafan. Marawaxadda iyo matoorku waxay u jiraan inay ka adkaadaan cadaadiska ma guurtada ah ee gudaha ku rakiban HEPA ama ULPA filter. Tani waa benefi ...
Nofeembar 15, 2020
Sidee warshadaha cuntada uga faa'iideystaan ​​musqulaha?
Caafimaadka iyo ladnaanta malaayiin waxay kuxirantahay awooda soo saarayaasha iyo baakadaha baakadaha si ay u ilaaliyaan jawi nabdoon oo nadiif ah inta lagu jiro wax soo saarka. Tani waa sababta xirfadleyda qaybtani ugu hayaan heerar aad u adag marka loo eego ...
Airwoods HVAC: Bandhigga Mashaariicda Mongolia
Airwoods waxay ku guuleysatay in ka badan 30 mashruuc oo ku yaal Mongolia. Oo ay ku jiraan Bakhaarka Waaxda Gobolka Nomin, Tuguldur Center Shopping, Hobby International School, Sky Garden Residence iyo inbadan. Waxaan u heellannahay cilmi baarista iyo tiknoolajiyadda oo horumarisa ...
Loading Weelasha loogu talagalay Mashruuca Bangladesh PCR
Xirxirida iyo raridda weelka sifiican ayaa fure u ah helitaanka rarka qaab wanaagsan marka macaamilkeenu qaata dhinaca kale. Mashruucyadan nadaafadda ee Bangladesh, maareeyahayaga mashruuca Jonny Shi wuxuu ku sugnaa goobta si uu kormeero una caawiyo dhammaan howlaha rarka. Wuxuu ...